Siyaabo Quick in kaabta iPhone Data si Mac leh / aan Lugood
Sidee ayaan files gurmad, oo ay ku jiraan music, sawiro, iyo videos ka iPhone in MacBook Pro orodka ee OS X Mavericks? Lugood isla markaasi diiday in ay sameeyaan wax la mid ah syncs files si iPhone ah. Fadlan caawi. Thanks! - Owen
Si loo hubiyo ammaanka goobaha iPhone iyo faylasha aad, waa in gurmad aad iPhone si joogto ah aad. Marka ay wax qaldamaan aad iPhone, aad si fudud u soo celin kartaa iPhone la gurmad ugu dambeeyay iPhone aad sameeyey. In socda, xal u macluumaadka la xiriira gurmad iPhone si Mac iyo sidoo kale in lagu daboolay. Guji si aad u akhri qaybta aad xiisaynayso:
Qaybta 1. kaabta iPhone si Mac, iyada oo aan Lugood & leh Lugood
Location Qaybta 2. iPhone kaabta File iyo Noocyada File Mid
Part3. IPhone Music / Photos kaabta / Videos si Mac
Qaybta 4. iPhone shawladda kaabta u Mac
Qaybta 1. kaabta iPhone si Mac, aan Lugood & leh Lugood
IPhone kaabta aan Lugood
IPhone kaabta si Mac via Lugood
Haddii ay tahay dhibaato aad u xiriiriyaan iPhone la Mac in ay gurmad iPhone si Mac via Lugood, laga yaabaa inaad la isticmaalayo iCloud in gurmad iPhone si Mac aan Lugood. Waa quruxsan fudud si ay gurmad iPhone si Mac la iCloud. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si ay u hubiyaan waa in shabakad uu yahay mid xasiloon. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka in gurmad iPhone si Mac aan Lugood, laakiin iCloud.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la Wi-Fi iyo in la hubiyo network waa deggan;
Tallaabada 2. Tubada Settings> iCloud . Laga soo bilaabo halkan, waa in aad soo gashid aad iCloud account ama ID Apple. Haddii aanad haysan mid ka mid ah weli, in aad marka hore mid ka mid ah waa in diiwaan.
Tallaabada 3. Tubada Kaydinta & kaabta ka dibna tirtiri ee kaabta iCould on. Tubada Back Up Hadda .
Qaadashada ammaanka macluumaadka gaarka loo leeyahay tixgelin, dadka qaar ka mid ah ma doonayo in aan gurmad iPhone via iCould, adeeg daruurtii, laakiin door bidaan isticmaalaya Lugood. Nasiib wanaag, waa mid aad u fudud in ay gurmad iPhone si Mac via Lugood aad. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone aad Mac via aad cable USB iPhone.
Tallaabada 2. Riix Lugood View menu dooro Show galeeysid .
Tallaabada 3. Guji aad iPhone hoos AALADAHA galeeysid ah. Laga soo bilaabo dhanka midig, waxaad ka arki kartaa fursad u hayaan . Dooro Tani computer iyo Back Up Hadda . Taasi waa!
Qaybta 2. iPhone Location kaabta File iyo Noocyada File mid
Halka laga helo iPhone gurmad file on Mac?
: Ka dib marka aad gurmad iPhone si Mac, aad file gurmad ee buugga this ka heli kartaa Maktabada / Codsiga Support / MobileSync / kaabta . Si aad u hubiso oo dhan hayaan iPhone, waa in aad hoos u hay Command, Shift, iyo G muhiim ah oo ku saabsan keyboard in ay awood u Go ay u menu. Ku qor si toos ah: Maktabadda / Codsiga Support / MobileSync / kaabta .
Waa maxay nooca faylasha waxay ku jiraan gurmad ah?
Gurmad kasta oo aad ka dhigay on Lugood waxaa ka mid ah videos qabashada iyo sawirada iPhone Camera Roll, xiriirada iyo xiriir Favorites, xisaab-taariikheed iyo dhacdooyinka taariikheed, Bookmarks Safari, qoraalada, iyo in ka badan. Wixii macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah, fadlan riix halkan >> . Faylal in gurmad iPhone aan la arki karin oo soo gaaray. Maalin maalmaha, haddii aad rabto in aad hesho file kasta oo ka kaabta iPhone, waxaad u baahan tahay oo ah shawladda kaabta iPhone u Mac .
Qaybta 3. kaabta iPhone Music / Photos / Videos si Mac
Waxaan ku xusan sida loo raad raac ah iPhone via Lugood ah kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, raad raac this ka kooban yahay oo kaliya iPhone goobaha, files ee ah iPhone Camera Roll, iyo barnaamijyadooda ku iibsaday. Files Media on iPhone, sida heesaha laga keeno ka CD-yada, sawiro ku iPhone Photo Library, iyo Internet bixi videos aan la taageeray kartaa ka iPhone in Lugood oo dhan.
Waxa aad u baahan doontaa:
A Mac la Lugood rakibay
Wondershare TunesGo (Mac) - kaabta iPhone Media Faylal ay si Mac
Dhoofinta heesaha oo dhan iyo playlists ka iPhone si Mac Lugood Library;
Photos kaabta ka iPhone in aan ka kaaftoomi Mac kasta;
Kaabta faylasha iPhone iyo videos audio si Mac galalka kala duwan;
Taageer iPhone badan, oo ay ku jiraan iPhone 5s ugu danbeeyay, iyo in ka badan >>
399.935.084 qof ayaa u soo bixi
Tallaabada 1. Download Wondershare TunesGo (Mac)
Download version maxkamad free of Wondershare TunesGo (Mac) oo ku xidh aad Mac. Ka dib markii aad u soo dajiyo, waxaa isla markiiba abuurtaan. Connect aad iPhone aad Mac via cable USB ah. Waxaad arki kartaa in Wondershare TunesGo (Mac) ogaadaa doonaa iPhone si toos ah oo soo bandhigay suuqa kala weyn.
Tallaabada 2. kaabta iPhone Media Faylal ay si Mac
# 1. Kaabta iPhone Music inay Mac. Riix Music galeeysid ka dibna waxaad arki kartaa heesaha oo dhan waxaa lagu soo bandhigaa xaq. Dooro kuwa doonayay oo guji dhoofinta ama dhoofinta in Lugood in gurmad iyaga ama folder ama Lugood Library aad Mac. By gujinaya Playlists galeeysid saxda ah, waxaad ka arki kartaa oo playlists iPhone gurmad si Mac aad.
# 2. Photos iPhone kaabta si Mac. Riix Photos galeeysid bidix, ka dibna waxaad arki kartaa in dhammaan sawiro aad iPhone badbaadiyey ee Photo Library, Roll Camera oo albums. Kuwaas oo aad u baahan tahay Dooro iyo guji dhoofinta in iyaga gurmad aad Mac.
# 3.Backup iPhone Videos si Mac. Haddii aad ku socoto in gurmad iPhone toogtay videos si Mac, guji Photos. Raadi videos ee ku giringiriya Camera iyo u dhoofin in aad Mac.
Ka sokow music, sawiro, filimada, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Wondershare TunesGo (Mac) codaysan gurmad, Voice Deymaha maqan , Lugood U, Podcasts, iyo ka badan si aad Mac.
Video Tutorial: Sida loo kaabta iPhone Media Faylal ay si Mac
Haddii aad u baahan tahay files qaar ka mid ah hal ka iPhone file kaabta on Mac, waxaad u baahan tahay oo ah shawladda kaabta iPhone u Mac si ay u caawiyaan. Haddii aad qabto wax fikrad ah oo ku saabsan ma noocan oo kale ah qalab, waxaan ku talinaynaa in aad isku daydo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery). Waxaa heps aad doonto ka iPhone Lugood ee kaabta faylasha soo saaro , oo ay ku jiraan videos, sawiro, xiriirada, fariimaha, iwm
Download iPhone kaabta shawladda in ay isku day ah hadda!
Photos Nuqul ka iPhone si Mac
Bedelka Videos ka iPhone si Mac
Bedelka Music ka iPhone si Mac
Import iPhone Xiriirada inay Mac
Talooyin ku iPhone in Transfer Mac
Apps Best on iPhone
Save iPhone Messages in PC
Sidee si ay u gudbiyaan MP3 in iPod
Dhoofinta iPhone Xiriirada in Gmail
Dhoofinta playlist ka iPhone in Lugood
Bedelka Xiriirada ka iPhone in PC
8 Siyaabaha Edit Lugood Music Library
An Easy Jidka si ay u gudbiyaan Music ka classic iPod in Lugood
> Resource > Lugood > Talo & Tricks u Sida loo kaabta iPhone si Mac